बेल्जियममा नेपालीले अप्नाए नेपालकै जस्तो चुनाव प्रचार शैली
अगस्ट ३१, २०१७
(ब्रसेल्समा चुनावी प्रचार) बेल्जियम सानो नेपाल हो । यहाँका नेपालीले नेपालको पारा, शैली, स्वाद र रस छोडेका छैनन् । अरु त के, चुनावको शैलीसमेत नेपालकै जस्तो छ । बेल्जियमको कुनैपनि खाले निर्वाचनमा सडक, चोकमा बसेर उमेदवारले प्रचारप्रसार...
आगामी निर्वाचनमा एन आर एन बेल्जियमकालागि जोशी र दहाल समूह : कसको प्यानल कस्तो ?
अगस्ट २२, २०१७
एन आर एन बेल्जियमको आगामी निर्वाचन अधिबेशन हुँदै छ । उमेदवारी दर्ता भैसकेको छ । यतिखेर लोक दहाल र सन्तोश जोशीको अलग अलग अध्यक्षतामा अलग प्यानल खडा भएको छ । दुबै पक्ष मत माग्न खटिएका छन् ।...
बेल्जियममा तमु समाजको टक्करमा तमुधिँ गठन
अगस्ट ९, २०१७
-शेर बहादुर छन्त्याल / बेल्जियम आफ्नो भाषा, संस्क्रिति, सभ्यता जोगाउन भनेर गठन भएको संस्था हो तमु समाज । अर्थात् गुरुङहरुको संगठन । तर यस्तो पवित्र उद्देश्य पुरा गर्ने काममापनि संगठन एकछत्र, एकांकी, एकतर्फी, हैकमबादी भयो भने के...
क्यान्सर पिडित प्रिया गुरुङलाई बचाउन गोर्खा समाज बेल्जियमको सहयोग, केहि सहयोग जुटाइदिन अभियानकर्ताहरुको आग्रह
जुलाइ १३, २०१७
गोर्खा जिल्ला मान्बु दुइ निवासी १९ वर्षिया प्रिया गरुङ्ग नशाको क्यान्सरबाट पिडित थिइन् । यति ठूलो रोगको उपचार कसरि गर्ने ? कसले जुटाईदिने खर्च ? गाउँका मानिसलाई एकैचोठि ठूलो रकम कसले दिन्छ ? बिपतमा थिईन् उनी ।...
कति संभव छ आफूले आफैंलाइ बदल्न ?
जुलाइ ७, २०१७
—रामवहादुर गुरुंग / वेल्जियम मेरो अनुभवमा मानिसले कुनैपनि विषयलाइ छिट्टै चिन्छन । किनभने सबै विषय आफ्ना वरिपरी घटेका हुन्छन र त्यसलाइ वुझ्दै,भोग्दै आएको आधारमा वा आफ्नै अनुभव वा वुद्धिको मियोमा अड्याएर निर्णय लिन्छन । भनिहालिन्छ मैल चिने,मैले...
जुन २०, २०१७
आफ्ना कागजपत्रहरु आफ्नै पतीले झुक्क्याएर लगिदिएपछि कविता गौतम नेपालमा अलपत्र परेकि थिईन् । पतीले अनेक आश्वासन दिएर उनलाई नेपाल लगेपछि त्यहिँ छोडेर आफू बेल्जियम फर्केका थिए । उनका कागजपत्र पनि उनका पतीले बेल्जियम ल्याएका थिए र कविता...
आस्थाका वन्दिहरुलाई तत्काल रिहा गर्न युरोपका बिभिन्न संस्थाहरुद्वारा माग
मे १३, २०१७
स्थानिय निर्वाचन खारेजीको शान्तिपुर्ण अभियान शुरु गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई संकटकालको झल्को दिने गरि गिरफ्तार गर्ने, झुट्टा मुद्धा लगाउने, यातना दिने र केहिलाई वेपत्ता वनाउने, पक्राउ परेकालाई वलजफ्ती सुरक्षाकर्मीका हतियार समाउन लगाई झुट्टा मुद्धामा...
बेल्जियममा लाखौं मजदूरहरुको जुलुस, नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चापनि सडकमा
मे २, २०१७
शेर बहादुर छन्त्याल / बेल्जियम पूँजीवाद नाफा कमाउने भोकाहरुको राज्यसत्ता भएको र यसले विश्वका जनतालाई जुनसुकै तवरबाट भेदभाव गरेकोले यसको अन्त्य गर्दै समाजवादी सत्ताको स्थापना नै विश्वको वर्तमान संकटको निकास हो’ भन्ने मर्ममा आयोजित ऱ्यालीमा नेपाली जनप्रगतिशील...
बेल्जियममा असन्तुष्ट पक्षद्वारा अलग्गै तमु समाज निर्माण, पुरानोलाई चुनौति
अप्रिल २४, २०१७
गत मार्च २६ २०१७ मा तमुसमाज बेल्जियमको नवौं अधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । उक्त अधिवेशनको वन्द सत्रमा जोडदार विरोधका वावजुद अन्यायपुर्ण र एकांकीतवरवाट कार्यसमितिको घोषणा गरियो । उक्त कदमलाई सच्याउन समवन्धित पक्षलाई वारम्वार ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि...
अप्रिल २०, २०१७
नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रिय सदस्य कल्पना मगरले आफ्नै पार्टीका सदस्यको हस्तलिखित किर्ते कागज बनाएर बदनाम गरेकि छन् । नेकपा माओवादीका करिब पाँच हजार केन्द्रिय सदस्य मध्ये एक र नेकपा माओवादी केन्द्र बेल्जियमको पार्टी सदस्य, नेकपा माओवादीकै बेल्जियमको...